हिमाल खबरपत्रिका | इथियोपियाबाट के सिक्ने ?
इथियोपियाबाट के सिक्ने ?
आफूजस्तै अवस्थाबाट गुज्रेको इथियोपियाभन्दा नेपाल धेरै कुरामा अगाडि भए पनि वायुसेवामा भने धेरै पछाडि छ।
यद्यपि इथियोपियाभन्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय धेरै छ, स्वास्थ्य सूचकमा नेपालले राम्रो सुधार गरेको छ भने व्यावसायिक वातावरण पनि नेपालमै सहज छ । तर, एउटा यस्तो क्षेत्र छ जहाँ नेपालभन्दा इथियोपिया धेरै माथि छ । त्यो हो उसको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा । नेपाल एअरलाइन्स सरकारी हस्तक्षेप र अव्यवस्थाको दलदलमा फँसेको छ भने राज्यको स्वामित्व भएको इथियोपियन एअरलाइन्स प्रतिष्ठित र धेरै पुरस्कार हासिल गरेको कम्पनी हो ।
इथियोपियन एअरलाइन्स गत वर्ष अफ्रिकाकै सर्वोत्कृष्ट एअरलाइन्स छनोट भएको थियो र यो यस क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने एअरलाइन्स पनि हो । सरकारी स्वामित्वको भए पनि पूर्ण स्वतन्त्रता पाएको यो एअरलाइन्सप्रति अन्य अफ्रिकी देशहरूले इष्र्या गर्छन् । इथियोपियन एअरलाइन्ससँग बोइङ ७७७, बोइङ ७८७ र एअरबस ३५० जस्ता नवीनतम मोडेलका १०३ विमान छन् जसमध्ये एउटाको नाम माउण्ट एभरेष्ट राखिएको छ । यसको आफ्नै विशेष मर्मत ह्याङ्गर र चालक दलका लागि अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र छ ।
माउण्ट एभरेष्ट नाम दिइएको इथियोपियन वायुसेवाको नयाँ एअरबस ३५० ।
सन् १९८२ मा क्यानाडाबाट पाइलट प्रशिक्षण लिइसकेपछि नेपाल फर्किएका श्रेष्ठले तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका ट्विन अटर र त्यसपछि बोइङ ७५७ उडाए । उनले दुर्गमका विमानस्थलमा काष्ठमण्डप एअरलाइन्सका ‘सर्ट टेक अफ ल्याण्डिङ’ विमान पनि उडाए । तर, इथियोपियन एअरलाइन्सले पाइलट माग गरेपछि ड्रिमलाइनर उडाउने सपना साँचेका उनले तुरुन्तै आवेदन दिए । त्यहाँ गइसकेपछि सबैभन्दा पहिले उनले यूएनले चार्टर गरेको इथियोपियन एअरलाइन्सको ७६७ उडाए । त्यसबेला सुडान, हैटी र पूर्वी टिमोरमा तैनाथ नेपाली शान्ति सेनालाई ल्याउन लैजान उनले परिचित काठमाडौं विमानस्थलमा पनि उडान भरे ।